Vepamuviri Vermonters Regedza Kusvuta uye Fodya Chirongwa - 802Quits
Vermonters NDINODA KUREGA Vermonters vane pamuviri
BATSIRA BHESA RUBATSIRO RWAKO NEMWANA WAKO
1-800-QUIT-IZVO ine chirongwa chakakosha chevakadzi vatsva uye vanotarisira kusiya midzanga, e-fodya kana zvimwe zvigadzirwa zvefodya. Unogona kuve nemibvunzo nezvenzira dzakanakisa uye zvigadzirwa zvekukubatsira kurega kusvuta kana imwe fodya. Iwe uchashanda pamwe nekutsigira Pregnancy Kurega Kochi panguva uye mushure mekuzvitakura kwako.
9 inodaidzira neyako wega Kurega Kochi
Kutumira mameseji rutsigiro kunowanikwa mahara
Iyo yakagadzirirwa kurega chirongwa
Yemahara Nicotine Inotsiva Therapy ine chiremba chiremba
Up to $250 in gift cards by participating
Tora makadhi echipo iwe uchiedza kurega
Unogona kuwana $ 20 kana $ 30 kadhi rechipo kune yega yega yekupedzesera yekufonera (kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu) panguva uye mushure mekubata kwako. Nemurayiro wechiremba wako, Pregnancy Quit Coach inogona kukutumira yemahara kurega mishonga, senge nicotine zvigamba, chingamu kana lozenges.
Kurega Kusvuta kana Imwe Fodya ndicho Chipo Chikuru Chaunogona Kuzvipa Iwe Newe Mwana
Kana iwe uri nepamuviri kana uchifunga kuve nepamuviri, pane zvakawanda zvakanaka zvekurega kusvuta kana imwe fodya. Aya mabhenefiti anozokubatsira kuti unzwe zvirinani uye nekugadzira nharaunda ine hutano kumwana wako. Paunorega kusvuta:
Mwana wako anowana oxygen yakawanda, kunyangwe mushure mezuva rimwe chete rekusasvuta
Pane njodzi shoma yekuti mwana wako aberekwe nekukurumidza
Pane mukana uri nani wekuti mwana wako auye kumba newe achibva kuchipatara
Iwe unenge uine simba rakawanda uye kufema nyore
Uchave nemari yakawanda yekushandisa pane zvimwe zvinhu kunze kwemidzanga
Iwe unozonzwa zvakanaka nezve izvo zvawazviitira iwe nemwana wako
kufona 1-800-QUIT-IZVO (784-8669). Isa iyo Quitline nhamba mufoni yako kuitira kuti iwe uzive murairidzi pavanokudana kuti udzoke.